ढुकुटीमा नगद रित्तिएपछि सरकार ऋण खोज्दै, आर्थिक वर्षको सुरुमै किन भयो यस्तो? - khull Postढुकुटीमा नगद रित्तिएपछि सरकार ऋण खोज्दै, आर्थिक वर्षको सुरुमै किन भयो यस्तो? - khull Post
ढुकुटीमा नगद रित्तिएपछि सरकार ऋण खोज्दै, आर्थिक वर्षको सुरुमै किन भयो यस्तो?
पुरुषोत्तम ढकाल २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:३२ 257 Views
काठमाडौं: कोरोना महामारीले राजस्व आम्दानी घटेको बेला पर्वको महिना असोजमा ठुलो खर्च भएपछि सरकारको नगद रित्तिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सरकारले पहिलो चौमासिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणबापत ३० अर्ब रूपैयाँ उठाइएको छ। कातिकभित्र ५७ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने तालिका बनाइएको छ।’